पैसा राख्ने दराज …घरको कुन दिशामा…राख्ने …? – Gorkhali Dainik
पैसा राख्ने दराज …घरको कुन दिशामा…राख्ने …?
October 6, 2020 999
तपाईंकोमा पैसाको अभाव भइरहन्छ भने पैसा राख्ने स्थल अर्थात दराज/ बाकस गलत स्थानमा छ । गलत दिशामा बाकस राख्नाले तपाईंको गरिबी घटेको छैन । यस्तो अवस्थामा आउनुहोस जानौँ, पैसासँग जोडिएका समस्या भगाउनको लागि वास्तुशास्त्रका यी नियम पालना गर्न सकिन्छ ।
दराज दक्षिण भागमा जहिल्यै ढोकाभन्दा कमसेकम एक इन्च अगाडि तर्फ र आग्नेय साथै नैऋत्य कुनालाई छाडेर राख्नु पर्दछ । यसको अलावा दराजको पछिल्लो भाग जहिल्यै दक्षिणतर्फ र ढोका उत्तरतर्फ खुल्नु पर्दछ ।
ध्यान राख्नुहोस कि दराज जुन कोठामा राखिएको छ त्यो कोठामा केवल एकमात्र प्रवेश द्वार हुनु पर्दछ । खास कुरा यो छ कि सो कोठामा भएको ढोका दुइमूखे हुनु पर्दछ । जुन कोठामा तिजोरी राखिन्छ सो कोठामा आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य तथा दक्षिण दिशामा कुनै ढोका हुनु हुँदैन ।
दराज वाला कोठाको उत्तरी भागमा भए उत्तम हुन्छ । यदी ढोकाको मुख पूर्व या उत्तर दिशामा खुल्छ भने वास्तुले त्यसलाई शुभ मानेको छ । दराजको कोठामा पूर्व या उत्तरतर्फ केही उचाइमा एक सानो झ्याल पनि अवश्य हुनु पर्दछ ।
दराज भएको कोठा जहिल्यै आयातकार हुनु पर्दछ । यसको उचाई अन्य कोठाभन्दा कम हुनु हुँदैन ।
दराजको दिशा अनुसार यस्तो फल प्राप्ति**
-ईशान्य कुनामा राखिएको दराजबाट अर्थनाश हुन्छ ।
-जुन दराज खुट्टा हुँदैन, त्यहाँ पैसा राख्नु हुँदैन ।
-दराजमा सुगन्धित स्प्रे, अगरबत्ती राख्नुरहाल्नु हुँदैन ।
-आग्नेय कुनामा राखिएको दराजले बेमतलबको खर्च गराउँछ ।
-नैऋत्य दिशामा राखिएको दराजले केही समय पैसा जम्मा हुन्छ तर चाँडै खर्च या चोरी पनि हुन्छ ।
Prevलाखौँ मानिसमध्ये कुनै एकले मात्र देख्छन् यस्तो सपना….!
Nextजनकपुरका विद्यालय…महामारीकाबीच ६ महिनापछि सञ्चालन हुँदै…!
भोलीको राशिफल : वि.सं.२०७८ साल बैसाख ०७ गते । मंगलबार । ईश्वी सन् २०२१ अप्रिल २० तारिख
श्रीकृष्णको फोटो बेडमा राख्ने सर्तमा बिहे गरेको हुँ – श्वेता खडका (भिडियो हेर्नुस्)